2 Korinte 8 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
8 Ke kaloku siyanazisa, bazalwana, ngobubele obungasifanelanga bukaThixo obuye bajizekwa amabandla aseMakedoni,+ 2 okokuba ebudeni bovavanyo olukhulu bexhwalekile uvuyo lwabo oluninzi nobuhlwempu babo obunzulu benza ubutyebi besisa sabo baphuphuma.+ 3 Ndiyangqina ukuba, oku bakwenza ngamandla abo onke,+ ewe, nangaphezu kwamandla abo, 4 baza ngokuzithandela kwabo basibongoza ngokubongoza okukhulu ukuba babe nelungelo lokunikela ngobubele nokuba babe nesabelo kubulungiseleli obumiselwe abo bangcwele.+ 5 Yaye kungekhona njengoko sasilindele, kodwa kuqala bazinikela eNkosini+ nakuthi ngokuthanda kukaThixo. 6 Oku kwasikhokelela ekubeni sikhuthaze uTito+ ukuba, kanye njengoko wayeqalise oku phakathi kwenu, ngokunjalo ufanele akugqibe oku kunikela kwenu ngobubele. 7 Noko ke, kanye njengoko niphuphuma yonk’ into,+ ukholo nelizwi nolwazi+ nenyameko yonke nolu thando lwethu ngani, ngamana ningaphuphuma noku kunikela ngobubele. 8 Ndithetha, kungekhona ngendlela yokuniyalela,+ kodwa ngenxa yenyameko yabanye nokuvavanya ukuba uthando lwenu lolokwenene na. 9 Kuba niyabazi ububele obungasifanelanga beNkosi yethu uYesu Kristu, ukuba nakuba wayesisityebi waba lihlwempu ngenxa yenu,+ ukuze nibe zizityebi+ ngobuhlwempu bakhe. 10 Nalu ke olwam uluvo kulo mbandela:+ kokwengenelo+ yenu ukuba njengoko niqalise kwakunyaka odluleyo kungekuphela nje ukwenza kodwa kwanokufuna ukwenza;+ 11 kwenzeni nikugqibe oko, ukuze, kanye njengoko nanikulungele ukufuna ukwenza, ngokunjalo nikugqibe ngokwamandla enu. 12 Ukuba umntu unolangazelelo kuqala, umnikelo wakhe wamkeleka ngakumbi ngokoko anako,+ kungekhona ngokoko angenako. 13 Kuba andinanjongo yokuba kube lula kwabanye,+ kodwa kube nzima kuni; 14 kodwa ukuze ngokulinganisa intsalela yenu ngoku ilingane ukuswela kwabo, ize intsalela yabo ilingane ukuswela kwenu, ukuze kubekho ukulingana.+ 15 Kanye njengoko kubhaliwe kwathiwa: “Umntu onokuninzi akazange abe nokuninzi gqitha, nomntu onokuncinane akazange abe nokuncinane gqitha.”+ 16 Ke kaloku makubulelwe kuThixo ngokushukumisela intliziyo kaTito ekubeni nenyameko ngani njengam,+ 17 kuba uye eneneni wasabela kukhuthazo, waza ngenxa yenyameko yakhe enkulu, weza kuni ngokuzithandela. 18 Kodwa sithumela kunye naye umzalwana odume kuwo onke amabandla ngokuvakalisa iindaba ezilungileyo. 19 Asikuphela koko, kodwa wakwamiselwa+ ngamabandla ukuba abe ngumlingane wethu ohambahambayo ngokunxibelelene nesi sipho sobubele sisinyamekelayo ukuze kuzukiswe+ iNkosi nanjengobungqina bokukulungela kwengqondo yethu ukwenjenjalo.+ 20 Ngaloo ndlela sizamela ukuba kungabikho nabani na osihlaba amadlala+ ngalo mnikelo wokungagogotyi lutho+ siwunyamekelayo. 21 Kuba “senza ilungiselelo lokunyaniseka, kungekuphela nje emehlweni kaYehova, kodwa kwanasemehlweni abantu.”+ 22 Ngaphezu koko, sithumela kunye nabo umzalwana wethu esiye samngqina ngokufuthi kwizinto ezininzi ukuba unenyameko, kodwa ngoku unyameke ngakumbi ngenxa yentembelo yakhe enkulu kuni. 23 Noko ke, ukuba kukho umbuzo ngoTito, ungowabelana nam yaye ungumsebénzi olidlelane+ ngenxa yezilangazelelo zenu; okanye ukuba umayela nabazalwana bethu, bangabapostile bamabandla nozuko lukaKristu. 24 Ngoko ke bonakalisani kubo ubungqina bothando lwenu+ noboko sasiqhayisa+ ngako ngani, emabandleni.